Kutanga kudonhedza kweNzeve Pods ine Mheni tambo | IPhone nhau
"Rumore, runyerekupe, runyerekupe" sekutaura kwakaita rwiyo. Uye ikozvino kuchave nekuziva kwese kudonha pamusoro peiyo iPhone 7, iyo nyowani nhare kubva kuCupertino kambani iyo inofungidzirwa kutambira pasi rose pakati paGunyana wegore rino. Kunyangwe zvese zvichiratidzira kuti dhizaini ichachinjika zvishoma, izvo zvinoita sekunge zvichinyanya kuita pfungwa kutaura zvakanaka kune 3,5mm jack. Tasangana nhasi ne yekutanga kudonhedza kweNzeve Pods ine Mheni tambo, Mifananidzo inoratidzika kuratidza iyo Nzeve Pods iyo Apple ichasanganisira mune iyo iPhone 7 bhokisi.
Asi chokwadi chinoratidzika kunge chakasiyana. Kana tikatarisa mifananidzo iyi zvakadzama, pamusoro pekuve neyakaipisisa mhando yavanowanzo kuve nayo, tinoona kuti pamufananidzo kuruboshwe, iyo Mheni yekubatanidza nepurasitiki yayo chena, zvinoita kunge vane ruvara rwakareruka zvishoma kupfuura maNzeve ePoto padyo navo, zvinoita senge zvakare basa rePhotoShop mukutaura kwayo kukuru. Kune rimwe divi, iyo pikicha iri kurudyi inoratidza kubatana kweMheni kwakaratidzwa, isina rubber yekudzivirira, ine kucheka kusingazivikanwe kuve kwechokwadi, uye inoratidza chip icho chingafungidzire kuti Mheni ishande kuwedzera pakuona kuti ndeye yekutanga. zvishongedzo.
Kune rimwe divi, chinondirovesa zvakanyanya ndechekuti Apple iri kuzoshandisa tambo yakatenderedza muKubatanidza Mheni, kana iine zvakapfava tambo zvigadzirwa zvakaita seBeats, nechinangwa chekuti varege kukanganiswa. Zvisinei, isu tese takafungidzira izvozvo iPhone 7 haizove ne3,5 Jack yekubatanidza Icho ichokwadi, zvakadaro, ini handitende kuti iyi ndiyo nzira iyo Apple inosarudza kushandisa kuvhara kushomeka, kana ndiri akatendeseka, ini ndaizotenda zvakanyanya kuti iyo Ear Pods yakamira kuiswa mubhokisi zvakananga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Kutanga kubvarura kweNzeve Pods ine Mheni tambo